Fundamentalism yakagadzira kusununguka? Rabhi Michael Avraham
Fundamentalism yakagadzira kusununguka?
Responsa > Category: Philosophy > Fundamentalism yakagadzira kusununguka?
Josephon Yakabvunzwa makore matatu apfuura
Handizivi kana rabhi akanzwa nezve izvo zvanga zvichiitika mumakore achangopfuura munharaunda isina kufanira yeBa'alei Teshuvah saka ini ndichajekesa mumakore kana vazhinji veBa'alei Teshuvahs nenzira yekusiya mararamiro e-ultra-Orthodox uye Vatenduki vatsva havatombopindi mairi (Ini pachangu ndiri mwanakomana waTeshuvahs akashora Orthodoxy) Nhasi chaizvo inoratidzika seyemazuva ano Orthodoxy muhunhu hwayo hwese asi kana uchitarisa mutsara wekufunga kwavo munhu anogona kuona yakajeka fundamentalism. yekutenda kwakapfava kwevanhu vanoomerera kumutsara wakareruka muHalakhah uye nezvimwe uye ndinoshamisika nezve chiitiko chinopokana maFundamentalists vakagadzira nharaunda yakasiyana-siyana uye yakavhurika, ndingati imhaka yekusachena kwehunhu hwebato reBa'ath uye Sezvineiwo, vakawanda venhengo dzeBaath vandakasangana navo ndevemazuva ano mune zvechitendero.
Ko rabhi anogona here kutsanangura chiitiko ichi?
Mibvunzo ma tag: ט
Tsananguro yako inonakidza, kunyangwe ini ndisingazive kuti inomiririra yakawanda sei (inonyatso "vazhinji vevabati vemhinduro").
Pane zvinhu zviviri zvinotsanangura pano: 1. kuti vari kuita mazuva ano. 2. kuti vanochengeta dudziro yechokwadi ye halakhah nekutenda.
Handina chokwadi nezvezvirongwa zvako. Yemazuva ano Orthodoxy inowanzobatanidzwawo nekumwe kuchinjika halakhic dudziro. Netsanangudzo, zvinoita sekunge ibasa mune chimwe chinhu chekurarama nacho, kana kuverenga nhetembo nemabhuku, kana basa rehunyanzvi. handina kujeka kwandiri.
Panogona kuve nezvikonzero zvakawanda zveizvi: kusvika pakuziva imwe nyika (pane imwe nzira pamberi pavo). Taneta ne-over-fundamentalism (kuita kune danho revabereki kune rumwe rutivi, uye kutevedzera kupandukira kune rumwe rutivi). Pane zvechokwadi zvikonzero zvepfungwa ( the traumas. Havana kukura midzi mu-ultra-Orthodox tsika. Vabereki vavo zvakare verudzi rwekutsvaga).
Panguva imwecheteyo ivo havana imwe yechitendero modhi nekuti ivo vanoziva zvenyika kana ultra-Orthodoxism. Zvichida ndosaka kubata kwavo halakhah kuri kwekupedzisira-Orthodox.
Zvose izvi tsananguro zvinogoneka, asi chiitiko chacho chakakosha kuongororwa kwakarongeka.
Gideoni Akapindura makore 4 apfuura
Kazhinji kudzokororwa kwemhinduro hakuitike nekuda kwezvikonzero zvenjere, (hongu, ndakanzwa nezve "mapurofesa" vaive nechokwadi che "values" uye "nhaurirano") saka kushandisa pfungwa dzavo kuchakonzera kudzokororwa kwemubvunzo zvakare.
mikyab Vashandi	Akapindura makore 4 apfuura
Iyi i gross generalization. Anenge nhanho imwe neimwe yemunhu ine ndege dzinoverengeka, dzepfungwa uye dzehuzivi. Asi ese ari maviri aripo kumashure mumhinduro uye mukubuda mumubvunzo.